DAAWO VIDEO: Odayaasha Beesha Cayr oo Digniin ka soo saaray in la weeraro Ahl Sunnada Galmudug | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Odayaasha Beesha Cayr oo Digniin ka soo saaray in la...
DAAWO VIDEO: Odayaasha Beesha Cayr oo Digniin ka soo saaray in la weeraro Ahl Sunnada Galmudug
Waxaa jiray maalmahaan in Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee taageeraya Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ee garabka dowladda, ay wadeen qorshe ay Ahlu Sunna uga saarayan magaalada.
Odayaal kala duwan oo kulanka ka hadlay ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo xaaladda Galmudug la xiriirta, waxayna codkooda ku xoojiyeen in amniga Galmudug uu yahay mid lama taabtaan ah.
Sidoo kale, waxay Odayaasha Dhaqanka ugu baaqeen Dowladda Federaalka inaanan la barakacin dadka ku dhaqan Magaalada Dhuusamareeb, oo kol hore ay waxyeelo qaarkood ka soo gaartay dagaaladii Al-Shabaab looga xoreeyay magaaladaasi.
Odayaashu waxaa ay soo jeediyeen in wax kasta oo la isku hayo aanu xalku noqon qori caaradii, balse wadahadal lagu dhameeyo.
Hadalka Odayaasha Dhaqanka waxaa uu imaanaya, xilli maalintii Axada uu Madaxweyne Qoorqoor kormeeray Xarumaha Ciidamada Dowladda ku leeyihiin Magaalada Dhuusamareeb, isla-markaana uu ka dalbaday in la weeraro Ahlu Sunna, maadaama uu ku eedeeyay in ay diiday in laga wada hadlo khilaafka kala dhaxeeya, sida uu yiri.
Madaxweyne Qoorqoor waxa uu xilligaa caddeeyay inaanu aqbali doonin in laba maamul uu ka wada shaqeeyo Xarunta Maamulka Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb.
Odayaasha Beesha Cayr oo Digniin ka soo saaray in la weeraro Ahl Sunnada Galmudug